မန္တလေးမြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သုံးစွဲရာနေ ရာများကိုထပ်မံရှင်းလင်းရာ ဆေးအ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇွန် ၅-မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မင်းတဲ အီကင်းရပ်ကွက် မြို့ပတ်ကမ်းနား လမ်းအနောက်ဘက်ရှိ မူးယစ်ဆေး ဝါးသုံးစွဲရောင်းဝယ်နေသော ကျူး ကျော်တဲများကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်စည် ပင်က ဇွန် ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့သော်လည်း မူးယစ် ဆေးသုံးစွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာ တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“”အခုဟာကလည်း ဇီးအုပ် လိုပဲ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သုံးစွဲ နေရာတွေ အမြစ်ပြတ်အောင် ရှင်းတာ။ မန္တလေးမြို့မှာ မူးယစ် ကျော်စောတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေ ကို မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စုနဲ့ရဲက ဝင်ရှာပြီး စည်ပင်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း တရားမဝင်ကျူးကျော်အဆောက် အအုံတွေကို ရှင်းတာပါ””ဟု အောင် မြေသာစံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ဇော်နိုင်က ပြောကြားသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရောင်း ဝယ်နေသော ကျူးကျော်တဲ ရှစ်လုံး အား မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီးမျိုးအောင်နှင့် တပ် ဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှတ်(၁)မူးယစ်ဆေး ဝါးတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ဆန်းနှင့် တပ် ဖွဲ့ဝင်များ၊ စည်ပင်သာယာရဲတပ် ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးငြိမ်းချမ်းအောင် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ထွေအုပ်တို့ပါဝင် သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့များက ဝင် ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ မူးယစ် ဆေးဝါးသုံးစွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကိုသာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူနှင့် ရောင်း ချသူများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိခဲ့ ဘဲ အဆောက်အအုံများကို စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီက ရှင်းလင်း ခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချသုံးစွဲသော နေရာများကို ဇွန် ၂ ရက်က စတင်ရှင်းလင်းခဲ့ရာ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဇီးအုပ်ကျေး ရွာ ကွက်သစ်နှင့် ကံကြီးကုန်းကျေး ရွာကွက်သစ်အတွင်းမှ နေအိမ် အလုံး ၃၀ ကို ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး မူး ယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ ကိုးဦးကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
School Bus စီးရေ ၈၀ တောင်းခံထားသော်လည်း ၂၉ စီးသာရရှိသေး၊ ကျောင်းကြိုကိုယ်ပိုင်ကားများ ရပ်တင်ချစန?
အက်ဖ်အေဖလား ကွာတားဖိုင်နယ်တွင် မန်ယူနှင့် ဘရိုက်တန်တို့ တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများတွင် သတင်းဖော်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြ??